Groove: Enyemaka Enyemaka maka Supporttù Nkwado | Martech Zone
Groove: Enyemaka Enyemaka maka Teamtù Nkwado
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-abata ahịa otu, nkwado ndị ahịa, ma ọ bụ ọbụna gị n'ụlọnga ị na-amata ngwa ngwa otú atụmanya na arịrịọ ndị ahịa nwere ike isi furu efu na ikuku ozi ịntanetị nke onye ọ bụla na-enweta n'ịntanetị. A ga-enwerịrị ụzọ ka mma ịnakọta, ekenye, na ịdebe arịrịọ niile mepere emepe nye ụlọ ọrụ gị. Nke ahụ bụ ebe enyemaka desktọọpụ na-abata ma nyere aka hụ na otu gị lekwasịrị anya na nzaghachi ha na ọrụ ndị ahịa.
Groove Online Nkwado Tiketi System Atụmatụ
Icknye tiketi maka Ndị Otu - Kenye tiketi ụfọdụ ndị otu ma ọ bụ otu dị iche iche. Tinye ndetu nkeonwe naanị gị na ndị otu gị nwere ike ịhụ. Jụọ ajụjụ, tụọ aro, ma ọ bụ nyochaa ozi sitere na ndị otu ọhụụ ọhụrụ tupu eziga ha. Hụ kpọmkwem ihe na-eme na Groove na ezigbo oge. You'll ga-ama mgbe enyere ọrụ tiketi, dechara ya, meghee ya, ma ọ bụ gosi ya.
Ama ndị ahịa zuru ezu - Adịghị ịchụ nta maka tiketi ochie iji hụ ihe onye ahịa na-ekwu. Nweta ọ bụla ahịa nkwado niile akụkọ ihe mere eme na otu click.
Ngwaọrụ arụpụta ihe - Chekwaa azịza nye ajụjụ niile, ma tinye ha na ozi ọ bụla na ozi ọ bụla. Mepụta aha mmado iji hazie tiketi ma ọ bụ pịa ha maka ọdịnihu na-eji usoro ọ bụla kachasị mma maka gị. Jiri iwu machiini etu esi edozi tiketi. Iji maa atụ, ekenye onye otu egwuregwu tiketi si na onye ha si, ma ọ bụ ozi ọkọlọtọ nke gụnyere okwu ahụ ngwa ngwa.
email - Nsogbu usoro nsogbu nke Groove dị ka email nye ndị ahịa gị. Ndị ahịa gị agaghị agabiga usoro nbanye ọzọ ma ọ bụ zoo nọmba tiketi iji nweta enyemaka.
Social Media - Hụ ma zaghachi Tweets na Facebook mgbidi posts ndị na-ekwu maka akara gị, ma gbanwee ngbanye mmekọrịta gaa tiketi nkwado.
Sochie ekwentị nkwado - Banye nkọwa zuru ezu nke mkparịta ụka ekwentị nwere ike ịchekwa dị ka tiketi, yabụ ha ga-egosi na akụkọ ihe mere eme nke onye ahịa gị, ị nwere ike ịkọwa ha n'oge ọ bụla.
Afọ ojuju - Kwe ka ndị ahịa gị nye ọkwa nzaghachi gị ma nye gị nzaghachi.
ọdọ Àmamihe - Nyere ndị ahịa gị dị n’ịntanet aka iji aka ha nyere onwe ha aka.
Groove Nkwado Tiketi Njikọ
Wijetị - Ngwaọrụ nkwado Groove na-eme ka ndị ahịa mara mgbe niile ka esi abanye, ọ nwere ike ịhazi ya ka ọ bụrụ akụkụ nke enweghị saịtị gị.
API - Jiri nke anyi API sere data ndị ahịa site na CMS gị, ngwa ịgba ụgwọ, ma ọ bụ sọftụwia ọ bụla ọzọ nke 3rd, ma lee ya na profaịlụ onye ahịa gị n'akụkụ tiketi ọ bụla.
ndụ chat - Nzọụkwụ abụọ SnapEngage ma ọ bụ Olark na-akparịta ụka na-akparịta ụka iji mee ka nkata gị na Groove ma kwado ndị ahịa gị n'oge.
CRM - Njikọ Groove na Highrise, Akwụkwọ Mpempe akwụkwọ, Nimble, Zoho ma ọ bụ Capsule wee nweta nnweta nke ọma banyere ozi ndị ahịa miri emi site na CRM gị, nke nwere ike ịlele n'akụkụ tiketi ọ bụla. Ọ bụrụ na ezughị, ha na-enye mwekota na Zapier.
email - MailChimp, Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi, na Njikọ kọntaktị mgbe niile.
slack - mwekota ozugbo na ikpo okwu nkwukọrịta otu gị.
uzo bụ usoro ịkwụ ụgwọ-akwụ ụgwọ ebe ịnwere ike ịgbakwunye ma wepu ndị ahịa na akaụntụ gị, na-akwụ $ 15 kwa onye ọrụ kwa ọnwa.
Bido Ọnwụnwa ụbọchị iri atọ
Tags: Ngwaọrụ APIAkwụkwọ mpempe akwụkwọmgbasa Ozi NyochaaCapsuleKpọtụrụ na mgbe niileuzouzoaka desktọọpụ ngwaọrụhelpdeskIsi mmalitemailchimpNimbleOlarkMgbapụsupportotu nkwadoNkwado wijetịìgwèỊnye tiketiikeZoho
Key Metrics nke nchịkọta maka Inbound Marketing
Jenụwarị 5, 2017 na 11:54 PM
Daalụ maka ịkekọrịta oke ozi gbasara sistemụ tiketi Enyemaka, olee otu o si enyere gị aka n'ịkwado otu ..